Yangon to Bangkok Highway Project Kicks Off | Myanmar Business Today
HomeBusinessYangon to Bangkok Highway Project Kicks Off
The Yangon-Bangkok highway project that will allow people to reach Bangkok Yangon by bus in nine hours has launched with financial assistance from Asia Development Bank, according to the Ministry of Construction.
Currently, it takes 16 hours to travel 570 miles from Thialwa, Yangon to Bangkok by vehicles.
One the new route, it will take four andahalf hours to drive from Thilawa to Myawaddy city, the Myanmar-Thailand Border, and another four-and-a-half-hour from Maesot to Thailand. The two sides are in talks on the project, Dr. Kyaw Lin, Deputy Minister of the Ministry of Construction, said.
To connect Thilawa Port to Bangkok in nine hours, Myanmar has been building an outer ring road in Yangon to avoid traffic congestion which starts from Htaukkyant to downtown Yangon populated with buses, cars, and other vehicles. Moreover, it also builtanew expressway connecting Bago and Kyaikhto as well as other outer ring roads in other cities such as Kyaikhto, Thaton, and Belin.
The Yangon-Bangkok Road will give rise to the new economic corridor for cities east of Yangon such as Thanlyin, Thonegwa, Khayan, Thanatpin, Bago, and Kyaikhto helping them grow.
The economic corridor will boost the trade with Thailand, Myanmar’s second-biggest trade partner in terms of trade volume. The two countries’ trade is around $5.4 billion. Moreover, it will allow other greater Mekong region countries, Laos, Cambodia, and Vietnam, to use Thilawa Port to access the international market generating Myanmar for the use of the port.
Moreover, the new dry ports, economic zones, and storage facilities, if the country manages to build along the road, will boost the country’s economy and generate jobs.
အာရှဖွံဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ချေးငွေအကူ အညီ ဖြင့် ရန်ကုန်မှဘန်ကောက်သို့မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် သွားလာနိုင်ပြီး အချိန် ၉ နာရီသာကြာမည့် စီမံကိန်းကို စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်သီလဝါမှ ဘန်ကောက်အထိ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် သွားပါက ၁၆ နာရီ ခန့်ကြာ မြင့်ပြီး ခရီးမိုင် အရှည် ၅၇၀ မိုင်ခန့်ရှိကြောင်းသိရ သည်။
ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်ကိုယာဉ် မောင်းချိန် ၉ နာရီဖြင့် ရောက်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ရန်ကုန် သီလဝါမှ မြဝတီနယ်စပ်ထိ ကြာချိန် ၄ နာရီခွဲဖြင့် လည်းကောင်း ထိုနည်းတူ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်မှလည်း မြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်မှ ဘန် ကောက်ထိ ကြာချိန် ၄ နာရီခွဲဖြင့် ရောက်ရှိ နိုင်ရန်အတွက် (ADB) အစည်းအဝေး၌ နှစ်ဖက် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဆောက် လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ကျော်လင်း က ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သီလဝါဆိပ်ကမ်းမှ ဘန်ကောက်ထိ ယာဉ်မောင်းချိန် ၉ နာရီဖြင့် အရောက်သွားရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့ထဲမှ သွားလာပါက ရန်ကုန်မြို့ ထောက်ကြန့်မှ စ၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို စတင်ကြုံရမည်ဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ နှင့် အနှေးယာဉ်များ များပြားသောကြောင့် ယာဉ်မောင်းချိန် ၉ နာရီ ဖြင့် သွားနိုင်ရန် မဖြစ် နိုင်သဖြင့် ပဲခူးကျိုက်ထို အမြန်လမ်းမသစ်ကြီးကို ဖောက်လုပ်ကာ မြို့ရှောင်လမ်းများကိုလည်း ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ယခုအခါ ဖောက်လုပ်ဆဲ မြို့ရှောင်လမ်းအချို့မှာ ပြီးစီးတော့မည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ကျိုက်ထိုမြို့ရှောင်လမ်း ဖောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ မြေသားလုပ်ငန်းပြီးစီးခဲ့ပြီး မကြာခင် လေးလမ်းသွားမြို့ရှောင်လမ်း အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သထုံ မြို့ရှောင် လမ်းကိုလည်း ဒုံသမိ တံတားမှစ၍ သထုံမြို့၊ ကျိုက်ကော် သိမ်ဆိပ်တို့ကို ရှောင်ကာ ဘီးလင်း မြို့အနီးအထိ ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာမှ သိရသည်။
ကျိုက်ထိုမြို့ရှောင်လမ်းနှင့် သထုံ ကျိုက်ကော် သိမ် ဆိပ် မြို့ရှောင်လမ်းမကြီးများ ပြီးစီးပါက ရန်ကုန်သီလဝါ မှ မြဝတီမြို့ထိ အချိန် ၄ နာရီ ခွဲဖြင့် ခရီးပေါက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဖက်မှ လည်း လမ်းများအဆင့်မြှင့်ပြီးပါက မဲဆောက်မြို့ နှင့် ဘန်ကောက် မြို့သို့ ကြာချိန် ၄ နာရီခွဲဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့ဘက်အခြမ်းတွင် သန်လျင်၊သုံးခွ၊ခရမ်း၊သနပ်ပင်၊ပဲခူး-ကျိုက်ထို စီးပွားရေးစင်္ကြံလမ်းမအသစ် ပေါ်ထွက်လာမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည့် ရန်ကုန်၊ ထောက်ကြန့်၊ လှည်းကူး၊ အင်းတကော် နှင့် ပဲခူးစင်္ကြံလမ်းပိုင်းမှာ ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ့ဖြိုး လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်း စီးပွားရေး စင်္ကြံ လမ်းပြီးစီးသွားပါက ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပျှမ်းမျှ တစ်နှစ်လျှင် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရှိသည့် မြန်မာ့ ဒုတိယအများဆုံးကုန်သွယ်ဘက် ဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း နိုင်ငံများဖြစ်ကြသော လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများကပါ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြတ်သန်း၍ ရန်ကုန်မြို့ သီလဝါ စက်မှုဆိပ်ကမ်း ပင်လယ်ထွက်ပေါက်မှ တစ်ဆင့် အခြား ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ လွယ်ကူစွာ ကုန်စည်စီးဆင်းနိုင် သဖြင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှုများ၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းဖြတ် သန်းသွားလာ အသုံးပြုခများနှင့် အခြားအခွန် အခများလည်း ရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပဲခူး-ကျိုက်ထိုအမြန်လမ်းမကြီးပြီးစီးပါက ADB ချေးငွေဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း လုပ်ငန်း များ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့ဘက် စင်္ကြံလမ်း သန်လျင်၊သုံးခွ၊ ခရမ်း၊သနပ်ပင်၊ ပဲခူး လမ်း ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ သီလဝါဆိပ်ကမ်းအထိ ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့ဘက်စီးပွားရေး စင်္ကြံ လမ်းမ သစ်ကြီး၏ လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းဘေးဝဲယာ တွင် စီးပွားရေး ဇုန်များ၊ သိုလှောင်ရုံများ နှင့် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း Dry Portများတည်ဆောက် နိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခြားဒေသများမှ လာရောက်သူများအတွက်ပါ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ သိရသည်။
Previous articleLocal gold prices reflect global gold prices
Next articleMNA to fly special flights to Singapore